May 2020 – Let Pan Daily
Let Pan | May 31, 2020
“ဂျပန် စစ်သား တမလွန်က စောင့်နေသည်” (ဖြစ် ရပ် မှန်) “နိဟွန်းဂျင်းနို့ ဟဲအိရှိ (ဂ) မတဲအိမတ်စု ………………. ” ဂျပန်စာကို မြင်တိုင်း အမှတ်မထင် အသံထွက် ဖတ်ဖတ်မိ တတ် နေတဲ့အကျင့်က ဂျပန်စာလေ့လာနေသူ သတိုး အတွက် အဆန်းတကျယ်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူး…. ၊ ထူးဆန်းတာ က ဒီနေရာမှာ
“မိန်းကလေး အချင်းချင်းတောင်ငေးမောသွားစေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီ ရဲရဲနဲ့ ချောမော လှပလွန်းနေတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်”
“မိန်းကလေး အချင်းချင်းတောင်ငေးမောသွားစေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီ ရဲရဲနဲ့ ချောမော လှပလွန်းနေတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်” နာမည်ကျော်ဆယ်လီ မင်းသမီးတွေထဲကမှ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ကတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းရဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထုတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖြူဝင်းတဲ့အသားအရည်တွေနဲ့ အလှတရားတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့
“မင်္ဂလာပါ” ဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်း စကားကြောင့် ရေခဲတိုက် အအေးခန်း သေမင်းလက်ကနေ သီသီကလေး လွတ်မြှောက် ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး (ဖြစ်ရပ်မှန်) သားသတ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အလုပ်ချိန်ပြီးခါနီး အိမ်မပြန်ခင်လေးမှာ ခုတ်ထစ်ပြီး အမဲသားတွေကို မပုတ်သိုးအောင် တန်းစီချိတ်ဆွဲ ထားတဲ့ အအေးခန်းထဲကို ဝင်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဝင်ပေါက်သံတံခါးကြီးဟာ ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတယ်။ တံခါးကြီးဟာ အထဲကနေ
နိုင်ငံခြားပြန်တွေ ရဲ့ ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်လေး ကို ဇနီးလေးနဲ့ အတူတူ သရုပ်ဆောင်ရင်း ဟာသဗီဒီယိုလေး ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ကိုပေါက်
နိုင်ငံခြားပြန်တွေ ရဲ့ ရယ်စရာ အဖြစ်အပျက်လေး ကို ဇနီးလေးနဲ့ အတူတူ သရုပ်ဆောင်ရင်း ဟာသဗီဒီယိုလေး ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ကိုပေါက် ဒါရိုက်တာကိုပေါက် ကတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာ နာမည်တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည်နေသူတ စ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက်က “ရိုးမပေါ်ကျတဲ့မျက်ရည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အက ယ် ဒမီ ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်နေလျက်ရှိပြီး နာမည်ကြီး
ပခုက္ကူမြို့က သရဲ အခြောက်ဆုံး နေရာ ( ၁၀ ) ခု ကို ဖော်ပြပေး လိုက် ပါ တယ် ။ မိတ်ဆွေ တို့ လေ့လာချင် ရ င်လည်း ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက်လေ့လာနိုင်အောင် လိပ်စာတွေပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်ပေး ထား ပါ တယ်
မိတ်ဆွေများ အားလုံးအတွက် … ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွက် (၁) လစာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင် သည့် ကောင်းသော ဟောချက်များ မှန်က န်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင် သည့် မကောင်းသော ဟောချက်များ တက်တက် စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏
သရုပ်ဆောင်ဒွေး ဟာ မင်းသမီး တစ်ယောက် နဲ့ ချစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီ စိတ်နဲ့ပဲ သေခဲ့ ရတာလို့ ပြောပြလာတဲ့ ဒွေး ရဲ့ ဇနီး သည် သရုပ်ဆောင်ဒွေးဟာ မင်းသမီး တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ခဲ့ပီး အဲဒီစိတ် နဲ့ပဲ သေခဲ့ရတာလို့ ပြောပြလာ တဲ့ ဒွေးရဲ့ ဇနီးသည်။ သရုပ်ဆောင်ဒွေးဆိုတာ တစ်ချိန်က
ယနေ့ခေတ် ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ဖြစ်စဉ်များ နှင့် တူညီ နေသည့် လွန်ခဲ့သော နှစ် (၁၀၀) က စပိန်တုပ်ကွေး ယနေ့လက်ရှိခေတ် ကမ္ဘာကြီး တွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် Covid-19 မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအများအပြားကို စီးပွားရေးအရ များစွာထိခိုက်သွားစေခဲ့သလို လူအချင်းချင်းနီးကပ်သည့် ဆက်ဆံရေးများကိုလည်း ခွဲခြားမှု ဖြစ်သွားစေခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက
ကမ္ဘာ့ လူဦးရေထက်ဝက် ကို မရဏလက်ထဲပို့မယ့် ကပ်ဆိုးကြီး တစ်ခု ရှိနေသေးဟု ပညာရှင် တစ်ဦးဆို ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ကို မရဏလက်ထဲ ပို့ဆောင်ပေးမယ့် ရောဂါတစ်ခု ရှိနေသေးကြောင်း အများပြည်သူကို ပညာရှင်တစ်ဦးက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ပညာရှင်ကတော့ “How To SurviveaPandemic” စာအုပ်ကို ရေးသားတဲ့ ဒေါက်တာ
မီးတင်ရှို့ ခံရသော ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် ရဲကားမှ AR-15 ချေမှုန်းရေး သေနတ်ကို လုယက် ရန် ကြိုးစားမှုဖြစ် အမေရိကန် လူမည်းသေဆုံးမှုဂယက် ကနေဒါ၊ အင်္ဂလန် နှင့် ဂျာမနီသို့ ကူးစက် မီးတင်ရှို့ခံရသော ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် ရဲကားမှ AR-15 ချေမှုန်းရေးသေနတ်ကို လုယက် ရန် ကြိုးစားမှုဖြစ်။ ဂျော့ဖလွိုက်အတွက် တရားမျှတရေး မိမိတို့အသံကို